Sina sy orinasa mpamokatra vera sandblasted | LYDGLASS
Sandblasting dia fomba iray amin'ny vera fitaratra izay mamorona endrika mifandraika amin'ny vera mangatsiaka. Ny fasika dia mamono voajanahary ary raha atambatra amin'ny rivotra mihetsika haingana dia ho simba amin'ny tampony. Arakaraky ny hamaritana ny teknikan'ny sandblasting amin'ny faritra iray no vao mainka hiparitahan'ny fasika eny ambonin'ny tany ary hitombo ny halavany.
Ny vera vita amin'ny sandbasted dia vita amin'ny rano afangaro amin'ny emery ary atsipazo eny ambonin'ny vera amin'ny tsindry mafy.
Ity dia dingana iray amin'ny famolahana azy. Anisan'izany ny vera nopotehina sy ny vera vita sokitra fasika, dia vokatra vera namboarina ho lamina marindrano na intaglio eo amin'ilay vera ny milina sandblasting marindrano mandeha ho azy na ny milina sandblasting mitsangana. Ny loko dia azo ampiana amin'ny lamina antsoina hoe "jet-painting". "Glass", na ampiasaina miaraka amina milina fanaovana sokitra solosaina, sary sokitra lalina sy sokitra marivo, mamorona sary kanto manaitra toy ny fiainana. Ny vera sandblasted dia mampiasa teknolojia teknolojia avo lenta hanodinkodinana ny tampon'ny vera fisaka, amin'izay dia mamorona vokany matte translucent, izay manana hatsarana manjavozavo. Ny fampisehoana dia mitovy amin'ny vera mangatsiaka amin'ny ankapobeny, afa-tsy ny vera fanala namboarina ho sandblasting. Amin'ny haingon-trano ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, dia amin'ny toerana izay tsy mihidy ny faritra voafaritra no tena ampiasainy. Ohatra, eo anelanelan'ny efitrano fisakafoanana sy ny efitrano fandraisam-bahiny, ny efijery tsara tarehy dia azo atao amin'ny vera sandbasted.
Teo aloha: Vera fanaovana baskety
Manaraka: Fitaratra volafotsy, fitaratra tsy misy varahina
3mm 4mm 5mm fitaratra sandblasted
Mpamatsy fitaratra fasika 8mm
Glass namboarina manokana
Glass vera sandblasted
Sandblast Glass ho an'ny varavarana
Glass vita amin'ny sandblasted amin'ny vidiny tsara indrindra
Sandblasted Glass vs. Acid Etched Glass
5mm vera volom-boasary volon'ondry fotsy ho an'ny ...
4mm Glass henjana ho an'ny tranoona aluminium ary ...
12mm lavarangana fitaratra milomano dobo filomanosana